Ulahlekelwe zii-3 kwezi-5 kwiimpawu zokwenza iMpawu | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Agasti 22, 2014 Lwesine, ngoFebruwari 25, 2021 Douglas Karr
Bendikhona kumsitho wokuphehlelelwa kupapasho-kuphela malunga nenkcubeko yokutya eMidwest. Njengoko bendithetha neqela elidalile, bekukho ukuzingca okungummangaliso kuzo zombini iziqulatho, ubugcisa, kunye nemveliso egqityiweyo. Imagazini yayiqinile kwaye wawunokuziva umgangatho wephepha, unuke iphepha elitsha, kwaye phantse ngcamla ukutya okuchazwe ngokutyebileyo kweli phephancwadi.
Ndenze ukuba ndiqale ukucinga malunga nokubonakala okushiya abathengisi. Sixhomekeke kwimidiya yedijithali kule mihla ngenxa yexabiso eliphantsi kunye nobuchwephesha bobuchwephesha silibale ukuba uninzi lwabantu lubona kuphela into esiyenzileyo ngokubhaliweyo kunye nemifanekiso. Ukuba siyithatha inotshi, sinokwenza ividiyo apho banokuthi ngoku ukubona kwaye ukuzwa thina. Kodwa isezimbini kuphela izivamvo ezi-2 esinakho ukufikelela kuzo.
Ukuba uyafuna uku ukukhulisa ukukhokela, ayisiyiyo nje ngokutyhala enye i-imeyile kwibhokisi engenayo. Kuya kufuneka ufikelele kolo khokelo kwaye wenze umbono ukuba ufuna ukuqhuba ukuba bathathe inyathelo elilandelayo xa bethenga, baphinde basayine ikhontrakthi, okanye bandise inkcitho yabo kumbutho wakho.
Unokufikelela njani kwezinye izivamvo - touch, ivumba, kunye incasa - ukushiya umbono ongapheliyo? Ukuba uhlala edolophini enye, mhlawumbi kulula njengokuthatha ithemba lakho okanye umxhasi uye kudla isidlo sangokuhlwa. Kodwa uninzi lwethu lusebenza ngaphandle kwebanga lokuqhuba ukuze ukhetho lukhawulelwe. Mhlawumbi unokuba nemveliso yesiko eyenziweyo okanye into entle eprintiweyo. Mhlawumbi ungabandakanya ibhotile yewayini okanye ukutya okumnandi kwalapho okuthunyelwe ngeposi.
Into ebekade iqhelekile ngoku inqabile- isalatha kwithuba elimangalisayo lokwahlulahlula kukhuphiswano lwakho. Yintoni ongayenza ukushiya umbono ongapheliyo ngochukumisayo, ngevumba, kunye nencasa?
tags: 5 izivamvoIsizukulwana esikhokelayo se-b2bubudlelwane bamakhasimendeubudlelwane nabaxhasiukuzwakhokelaurhweboukondlaukubonazengqondolivumbangcamangoukuchukumisa